လမ်းမထက်မှာ လဲကျနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို ရက်စက်စွာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဖြတ်ကြိတ်ပစ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး | Buzzy
စက္ကန့် ၄၀ သာ ကြာမြင့်တဲ့ ဒီထိတ်လန့်ဖွယ် ဗီဒီယိုဟာ တရုတ်လူမှုကွန်ယက်မှာ ရေပန်းစားနေပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ အသေးစားဆိုင်ကယ်ကို စီးနင်းထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ဒဏ်ရာနဲ့ လဲနေတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ. ခြေထောက်တွေကို တက်ကျိတ်ပစ်လိုက်တာပါ။
စက်ကနျ့ ၄၀ သာ ကွာမွငျ့တဲ့ ဒီထိတျလနျ့ဖှယျ ဗီဒီယိုဟာ တရုတျလူမှုကှနျယကျမှာ ရပေနျးစားနပေါတယျ။ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ အသေးစားဆိုငျကယျကို စီးနငျးထားတဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ ဒဏျရာနဲ့ လဲနတေဲ့ ကလေးငယျရဲ. ခွထေောကျတှကေို တကျကြိတျပဈလိုကျတာပါ။
အနီးမှာတော့ အခြားသော ကလေးငယ်တစ်ဦးလည်း ရှိနေပြီး ကလေးငယ်က ဆိုင်ကယ်စီး အမျိုးသမီးကို ထပ်မလုပ်ဖို့ တောင်းပန်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါကို ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒေါသထွက်နေဟန်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ကလေးငယ် အော်ဟစ်နေတဲ့ကြားကပဲ တက်ကျိတ်လိုက်တာပါ။
အနီးမှာတော့ အခွားသော ကလေးငယျတဈဦးလညျး ရှိနပွေီး ကလေးငယျက ဆိုငျကယျစီး အမြိုးသမီးကို ထပျမလုပျဖို့ တောငျးပနျနတောကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒါကို ဂရုမစိုကျခဲ့ပါဘူး။ ဒေါသထှကျနဟေနျရှိတဲ့ အမြိုးသမီးဟာ ကလေးငယျ အျောဟဈနတေဲ့ကွားကပဲ တကျကြိတျလိုကျတာပါ။
ဒေသတွင်း သတင်းမှတ်ချက်တွေအရ ကလေးငယ်ဟာ အသက် ၅ နှစ်ဝန်းကျင်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ Yangjiangမြို. Guangdong ဒေသမှာ ဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာလို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုထဲက အမျိုးသမီးဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုတော့ ရှာဖွေမှုတွေ ပြုလုပ်နေဆဲပါပဲ။
ဒသေတှငျး သတငျးမှတျခကျြတှအေရ ကလေးငယျဟာ အသကျ ၅ နှဈဝနျးကငျြသာ ရှိပါသေးတယျ။ ဒီဖွဈစဉျကတော့ Yangjiangမွို. Guangdong ဒသေမှာ ဖွဈပှားသှားခဲ့တာလို့ ယူဆရပါတယျ။ ဒီဗီဒီယိုထဲက အမြိုးသမီးဟာ ဘယျသူဘယျဝါဆိုတာကိုတော့ ရှာဖှမှေုတှေ ပွုလုပျနဆေဲပါပဲ။
အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမျိုးသမီးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ အချို.က သူက လူမှ ဟုတ်ရဲ.လား ၊ တစ်ချိန်ချိန် သူကလေးရလာရင်ရော သူ့ကလေးကို ဒီလိုလုပ်မှာပဲလား စသဖြင့် ဝေဖန်နေတာပါ။ အချို.ကလည်း အမျိုးသမီး တူသော အကျိုးပေးပါစေဆိုပြီး ကျိန်ဆဲနေတာကိုေ တွ့ရပါတယ်။
အငျတာနကျ အသုံးပွုသူတှကေတော့ ဒီဖွဈစဉျနဲ့ ပတျသတျပွီး အမြိုးသမီးကို ဆိုးဆိုးရှားရှား ဝဖေနျနကွေပါတယျ။ အခြို.က သူက လူမှ ဟုတျရဲ.လား ၊ တဈခြိနျခြိနျ သူကလေးရလာရငျရော သူ့ကလေးကို ဒီလိုလုပျမှာပဲလား စသဖွငျ့ ဝဖေနျနတောပါ။ အခြို.ကလညျး အမြိုးသမီး တူသော အကြိုးပေးပါစဆေိုပွီး ကြိနျဆဲနတောကိုေ တှ့ရပါတယျ။
၂၀၂၀တွင် တရုတ်ပြည်က ဒေါ်လာ ၁၅၈ ဘီလီလျံးသုံးပြီး ဆင်းရဲပြည်သူပေါင်း ၃.၄မီလီလျံလုံးပပျောက်အောင် လုပ်သွားမည်ဟုသိရ
အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ စားသောက်ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်တိုက်သွားတဲ့ ကားတစ်စီးကြောင့် လူများစွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့
Cctv မှတစ်ဆင့်ကလေးကို အရုပ်တစ်ရုပ်လိုကြမ်းတမ်းစွာ ပစ်ချနှိပ်စက်နေတဲ့ ကလေးထိန်းလုပ်ရပ်ကိုသိရှိခဲ့ရ
ခန္တာကိုယ်အသားပေးခြင်းတွေကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကနေ ဒေါ်လာ ၂၀ ထိ ရရှိနေကြတဲ့ မလေးရှား ဆယ်ကျော်သက်များ
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းလွန်းလို့ သေခါနီးဆဲဆဲမှအံ့သြစရာကောင်းအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦး
လုပ်ငန်းခွင်မှာ မကောင်းသည့် အမူအကျင့်ရှိသူများကို ဖော်ပြသည့် စကားလုံးများ